Wanyengedzerwa neMySpace | Martech Zone
Muvhuro, September 11, 2006 Svondo, Gunyana 30, 2012 Douglas Karr
Ini ndichatanga nekutaura kuti ini handidi MySpace. Muchokwadi, ini handikwanise kumira MySpace. Ndine account yeMySpace kuitira kuti ndikwanise kuteedzera mwanakomana wangu, shamwari dzake ndivanaani, uye zvaari kunyora nekutumira. Anoziva ndicho chikonzero, uye haana mhosva nazvo. Ini ndinomupa yakawanda rusununguko pamhepo, uye nekudzoka, haatyori kana kushandisa kuvimba kwangu. Iye mwana akanaka.
Zvinotaridza kuti zvese zvandinodzvanya muMySpace hazvipindure kana kurodha zvizere Iyo yekushandisa interface inotyisa zvinotyisa. Ndakaverenga online kuti ndeimwe yemasaiti epamusoro pamambure. Handina chokwadi nei, zvinotyisa.
Zvino kwauya chokwadi cheMySpace…
1. MySpace HASI kubudirira kwehutachiona.
2. MySpace.com iSpam 2.0.
3. Tom Anderson haana Gadzira MySpace.
4. Mukuru weMySpace Chris DeWolfe akabatana neyakare spam.
5. MySpace yaive yakananga kurwisa Friendster.com.
Saka… zvinomiririra kuti MySpace ingori saiti yakagadzirirwa semombe yemari yekushambadzira. Akanaka zvakashata huh? Zvese zvakavanzika zviri mu 'taura zvese' kubva kuna Trent Lapinski, mutori wenhau akafumura chokwadi nezve MySpace pa Valleywag.
Inzwi rakanyarara? Hongu, ndinofunga saizvozvo zvakare. Kunyangwe nastier ndeyekuti varidzi veMySpace, Vadivelu Comedy Newscorp, vanonzi vanga vachiedza kuvhara chokwadi kuburikidza nekushungurudza uye kukakavara zviri pamutemo. Zvinosuruvarisa kuti sangano renhau… mumwe munhu akachengetedzwa neBumbiro uye vanochengeta 'chokwadi' vachabatanidzwa mune rakashata bhizinesi Uku kwave kumwe kurova kusangano renhau hombe… pamwezve mweya wekupedzisira hofori iri kufa.
Arrr! Yepasi Pose Kutaura Senge zuva rePirate riri kuuya